“Njem” nwere ihe di iche | Sansan
Akpa akpa kọmputa
Akpa onye ozo
“Njem” nwere ihe dị iche ọ pụtara
Nye onye ọ bụla, “njem” nwere ihe dị iche ọ pụtara. Maka ụmụaka na-enweghị nlekọta, ime njem nwere ike iri nri ụtọ na-atọ ụtọ nke mama m tinyere na ịhụnanya, ma soro ndị enyi nwee ike iji obi ụtọ soro, ọ bụ nke kachasị nwee obi ụtọ. Maka ha, ihe ọ pụtara njem nwere ike ịbụ “egwuregwu” na “rie”! Maka umuaka ndi huru n'anya na oge izizi, ha nwere ike idoghari njem n'uwe elu, yikwasị ha uwe nkịtị wee soro ndị ị hụrụ n'anya nọdụ na njem ụgbọ ala. Maka ha n'oge ahụ, ihe ọ pụtara njem bụ "ejiji" na "ịhụnanya"; Maka ndị na-eto eto ka batara n'obodo na ndị mmụọ jupụtara na mmụọ, njem na-abụkarị ihe na-atọ ụtọ. Obi ha jupụtara na ịnụ ọkụ n'obi, ha anaghị echere ịmara ihe ihe dị ebube dị n'ihu. Ihe ọzọ bara uru ka ọ nụrụ ụtọ na ịmụ ihe. N'oge a, ọ dịla anya ihe iche iche banyere njem na “egwuregwu” na “ịhụnanya na ịhụnanya”
, Ma nwere nghọta miri emi. Maka ndị agadi nwere ahụmịhe bara ụba na ndụ, "njem" echefula ebumnuche ya. N’adịghị ka ụmụaka ndị na-eme ntụrụndụ, ha achọghị ka ndị na-eto eto jiri anya ha na-achụ ihe ha enweghị. Naanị ihe ha chọrọ bụ ka ha hụ ọmarịcha nke a. N'ime ụwa, achọrọ m ka mụ na ezinụlọ m nọrịa karịa ma hapụ ihe ọma m na-echeta na ndụ a dị mkpụmkpụ.
Mgbe ị na-eme njem, ị ga-ahụ ifuru na osisi mara mma, ụmụ nnụnụ na anụ na-adịghị ahụkebe nke ị na-anụbeghị, ihe ntanetị ị na-ahụbeghị… will ga-ahụ na njem ahụ na-atọ ụtọ. Can nwere ike iche na ndụ adịghị mfe na njem ahụ, mara etu ị ga-esi were lekọta ihe ọkụkụ dị na cracks, shei ahụ gbajiri agbaji, mgbanwe nke cicada… Ọnọdụ dị egwu dị iche iche, ụfọdụ ihe enweghị ike ịmụta n'akwụkwọ ahụ. , ị chọrọ Discover n'eziokwu. Iji weghara oge ahụ ọmarịcha, jiri anya gị dekọọ, chọpụta. Njem bu obi uto nke obi. Ile anya na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ na ala ahịhịa buru ibu, ị ga-enwe ahụ iru ala nke ukwuu, ọnọdụ gị ga -akwu mma n'amaghị ama. Iswa zuru oke, ma naanị ya ga-atọ gị ụtọ. Kwee ka ọnọdụ gị fee, ka ikuku dị ọcha gbara gị gburugburu. You nwere ike ihi ụra n'udo ma dị ụtọ na nrọ nke udo. Na nrọ dị ebube: isi ahihia nwere ka o nwere ụtọ.
Ihe ọ dị mkpa ime njem bụ na ị nwere ike ịchọta ezi nzube nke ndụ, ị nwere ike ịmụba ihe ọmụma gị, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ, ị ga - eme ka onwe gị chefuo ma nweta ume.
Oge nzipu ozi: Mee-26-2020
© nwebisiinka - 2010-2020: Echekwabara ikike niile. ,